भाइरल भिडियो : सलामी पाउने नेताको अनौंठो रहर ,सलामी कहाँ र कुनवेला प्रहरी ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
नेताहरु किन मन्त्री बन्न खोज्छन्? किनभने, मन्त्री बनेपछि मानसम्मान पाइन्छ। गाडीलगायतका सुविधा पाइन्छ। सेना–प्रहरी लगायत सुरक्षा निकायको सलामी पनि पाइन्छ।
यस्ता सम्मान पाएपछि आफूलाई समर्थन गर्छन्, प्रधानमन्त्रीमा टिक्न सजिलो हुन्छ भनेर होला, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ६४ जनाको मन्त्रीमण्डल बनाएका छन्। बीबीसी साझा सवालकी प्रस्तोता विद्या चापागाईले कालिकोटबाट पोष्ट गरेको एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो । उनले विना विभागीय मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफू बसेको होटलकै बाहिर नेपाल प्रहरीबाट सलामी लिइरहेको भिडियो पोष्ट गरेकी थिइन् ।
भिडियो पोष्ट गर्दै चापागाईले लेखिन्- ‘सर्वहारा वर्गका मन्त्रीज्यू चुनाव लागेर एक महिना जिल्ला बस्दा पनि होटेलको आँगनमा हरेक बिहान यसरी सलामी ग्रहण गर्नुहुँदो रहेछ । संसारलाई फेर्छु भन्थ्यो,आफैं फेरिएछ…. ।
औपचारिक सलामी त्यस्ता व्यक्तिलाई दिइन्छ, जसको गाडीमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा फहराएको हुन्छ। तर, बुधबार सुर्खेतबासीले सडकमा एउटा रोचक दृष्य देख्न पाए।
हिँडिरहेका एकजना व्यक्ति बुद्धमार्गस्थित मूल सडकमा नै प्रहरीबाट सलामी लिइरहेका थिए। ती व्यक्तिले प्रहरीबाट लिइरहेको दृष्य सडक वरिपरि रहेका स्थानीयवासीले रमाइलो मानेर हेरिरहेका थिए।
पछि स्थानीयवासीले थाहा पाए, उनी सञ्चार राज्यमन्त्री तप्तबहादुर बिष्ट पो रहेछन्। सुर्खेत–३ का निवर्तमान सांसद बिष्ट अहिले सुर्खेत–२ (ख) बाट प्रदेश सभामा उम्मेदवार छन्।